Somaliland Oo Shaagtay In Beesha Caalamku Dhex-dhexaadinayso Puntland iyo Puntland Oo Beenisay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Shaagtay In Beesha Caalamku Dhex-dhexaadinayso Puntland iyo Puntland Oo Beenisay
Hargaysa (SDWO): Xukuumadda Somaliland ayaa shaacisay in wadamadda beesha caalamku ay wadahadallo dhex-dhexaadin ah oo ku saabsan sidii loo debcin lahaa xaaladda degaanka Tuke-raq ka dhex waddo maamulka Soomaaliyeed ee Puntland.
Wasiirka amuuraha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shirre, ayaa cadeeyay in uu jiro wada xaajood hoose oo dalal shisheeye ay ka dhex wadaan labadda dhinac. Isagoo xusay in ay Somaliland ahaan ku qanacsan yihiin xaaladda lagu dhameeyo si nabad ah.
Dr. Sacad Cali Shirre, waxa kaloo uu sheegay in dejinta xaaladda colaadeed ee u dhaxay Somaliland iyo Puntland ay beesha caalamku ugu soo bandhigtay qodobo dhawra oo la doonayo in loo marro hanaanka dhex-dhexaadinta.
“Wuu jiraa dedaal uu caalamku waddo, oo ah sidii arrinta loogu soo af-jari si nabad ah. beesha caalamku waxay soo jeediyeen afkaar ah in dagaalka la joojiyo, xidhiidh-na la wada yeesho. In madaxda ciidamadu ay wada xidhiidhaan. In maxaabiista la kala hayo laga hadlo. In wadahadalkii dib loo bilaabo.
Anagu (Somaliland) intaba waanu ku qanacsanahay, oo waa jidka loo marayo sidii nabad loogu soo af-jari lahaa arrinka taagan. Gobolka Sool uma baahna dagaal, wuxuu u baahan yahay nabad iyo horumar”ayuu yidhi wasiir Sacad oo maanta la hadlay SAAB TV.
Geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa dusha u saaray colaadda ka taagan gobolka Sool in ay hurinayaan dadyaw jooga meello dibadda ah, isla markaana duulaan ku ah dadka iyo dalka Sool.
Waxaanu sheegay in aanay Somaliland marnaba doonaynin in xuduudkeedda ay si xaagga ku gaadho ama bulshadda Sool ay awood ciidan ku muquuniso sidii ay Somaliland u soo raaci lahaayeen.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Wadan waliba xaq buu u leeyahay in uu xadkiisa gaadho. cid ka soo hor jeedda oo kugula dagaalamaysa in aad xadkaaga gaadho ma jirto.
Arrintu waxay ka socotaa dad kaloo dibadda ah, oo xadkeena ka baxsan, oo ku duulaan ah dadkeena iyo dalkeena. Laakiin Somaliland uma baahna in ay dadkeedda dhibaatayso, oo ay xoog ku muquuniso, oo ay xoog xadkeedda ku gaadhayso”.
Dhinaca kale maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa beeniyay in ay jiro gebi ahaanba wax dhex-dhexaadin ah oo ay beesha caalamku ka dhex wado iyaga iyo Somaliland, isla markaana aanay waxba ka jirin warka ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland.
Af-hayeenka madaxtooyadda Puntland C/laahi Jaamac Qur’aan Jecel, oo warbaahinta kula hadlay magaaladda Boosaaso, wuxuu sheegay in aanu jirin wax heshiis ama xataa wadahadal ah oo u socda Somaliland iyo Puntland.
Waxaanu yidhi “Waxaan waydiinayaa wasiir Sacad Cali Shire, xaggeen kula heshiinaysaa Puntland? ma Laascaanood buu leeyahay, ma waxay kula heshiinaysaa Puntland Garoowe iyo Laascaanood dhexdooda?
Waxaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed waa la xoraynayaa Laascaanood, waa dhul Puntland. Waa dhul dastuuriya”.